Teta! | Jenụwarị 2012
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tongan Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Zulu
Michael lepụrụ anya hụ Brad ka ọ na-abịa, ụjọ abịa ya n’ihi na ọ ma ihe ọ na-aga ime. Mgbe Brad bịarutere, ọ manyere aka n’akpa ya, wepụta ihe nye Michael, sị ya: “Nnaa, were.” Michael elee ya anya n’aka, hụ isi wii wii a fụrụ afụ, bụ́kwanụ ihe ọ tụrụ anya na ọ ga-enye ya. Ọ chọghị ịnara ya wii wii ahụ, ma ọ dị ya ka Brad ọ̀ ga-elewe ya anya ka onye na-amaghị ebe a nọ ma ọ jụ ịnara ya ya. Michael ewetuo olu sị ya, “Jidegodị ya, ka ọ dị ụbọchị ọzọ.”
Jessica lepụrụ anya hụ Brad ka ọ na-abịa, ya ejikere ejikere n’ihi na ọ ma ihe ọ na-aga ime. Mgbe Brad bịarutere, ọ manyere aka n’akpa ya, wepụta ihe nye Jessica, sị ya: “Nne, were.” Jessica elee ya anya n’aka, hụ wii wii a fụrụ afụ, bụ́kwanụ ihe ọ tụrụ anya na ọ ga-enye ya. Jessica akata obi, sị ya, “I meela, anaghị m ewe. Ndụ a m dị na-atọ m ụtọ. Ma, Brad, amaghị m na onye ma ihe otú a ị ma ga na-aṅụ ụdị ihe a.”
GỊNỊ ka i chere mere Jessica ji kata obi gwa Brad na ya agaghị ewe wii wii ahụ o nyere ya? Jessica ma ụdị mmadụ ọ chọrọ ịbụ, ọ bụ ya mere o ji agbara nsogbu ọsọ, ọ chọghịkwa ka mmadụ na-atụrụ ya ihe ọ ga na-eme. Gịnị ga-enyere gị aka ka ị na-akata obi ka Jessica? Ọ bụrụ na ị zaa onwe gị ajụjụ ndị a anyị na-aga ịtụle ugbu a, ọ ga-enyere gị aka.
NKE MBỤ: OLEE EBE NDỊ M DỊ MMA YA?
Ihe mere i ji kwesị ịjụ onwe gị ajụjụ a: Ọ bụrụ na ị mata ebe ndị ị dị mma ya na ihe ndị ị ga-emeli, ọ ga-eme ka i nwee ike ịna-akata obi.
Chebagodịrị ihe a echiche: Onye ọ bụla nwere onyinye Chineke nyere ya. Dị ka ihe atụ, e nwere ndị ma otú e si ese ihe, nwee ndị ma akụ egwú nke ọma, nweekwa ndị ma eme egwuregwu ndị dị ka ịgba ọsọ. E nwere otu nwa agbọghọ aha ya bụ Raquel. * Ọ ma arụzi ụgbọala. O kwuru, sị: “Mgbe m dị afọ iri na ise, achọpụtara m na m ga-eme nke ọma ma m rụziwe ụgbọala.”
Ihe i nwere ike ịmụta na Baịbụl: Pọl onyeozi kwuru, sị: “Ọ bụrụgodị na abụghị m ọkà n’ikwu okwu, n’ezie, adịghị m otú ahụ n’ihe ọmụma.” (2 Ndị Kọrịnt 11:6) Pọl ekweghị ka ọnụ ndị mmadụ na-akọ ya na àgwà ọjọọ ha na-akpaso ya mee ka ụjọ bịa ya. O kweghịkwa ka o mee ka ọ hapụ ime ihe ndị ọ mụtara na Baịbụl n’ihi na ọ ma Baịbụl nke ọma.—2 Ndị Kọrịnt 10:10; 11:5.
Leruo onwe gị anya. N’okpuru ebe a, dee otu ihe ị ma eme nke ọma.
Ngwa, dee otu ezigbo àgwà ị na-akpa. (Dị ka ihe atụ, ị̀ dị obiọma? Ị̀ na-emesapụ aka? Mmadụ ọ̀ ga-atụkwasịli gị obi? Ị̀ na-abịa ihe n’oge?)
“Ihe jiri ndị ọzọ n’olu, m na-agbalị inyere ha aka. Ọ bụrụ na mmadụ bịara ịkwasara m ụwa ya, ya abụrụkwa na m ji ọrụ n’aka, m na-ahapụ ihe m na-eme gee ya ntị.”—Ugochi.
Ọ bụrụ na ị maghị otu ezigbo àgwà ị na-akpa, gbalịa cheta àgwà dị mma ị na-akpa ugbu a, bụ́ nke ị na-anaghị akpa mgbe ị bụ nwata. I cheta ya, dee ya n’okpuru ebe a. Dị ka ihe atụ, gụọ ihe dị n’igbe ahụ e dere “Ihe Ndị Na-eto Eto Ibe Gị Kwuru.”
NKE ABỤỌ: OLEE EBE NDỊ M NA-ANAGHỊ EME NKE ỌMA?
Ihe mere i ji kwesị ịjụ onwe gị ajụjụ a: Ọ bụrụ na ị kpachaghị anya, ebe ndị ị na-anaghị eme nke ọma nwere ike mee ka ị ghara ịbụ ụdị mmadụ ị chọrọ ịbụ.
Chebagodịrị ihe a echiche: O nweghị onye zuru okè n’ụwa a. (Ndị Rom 3:23) Onye ọ bụla nwere àgwà ọ na-akpa ọ ga-achọ ịkwụsị. Nwata nwaanyị aha ya bụ Seija kwuru, sị: “Amaghị m ihe mere ihe na-enweghị ihe ọ bụ ji ewe m ezigbo iwe. Obere ihe metụ, iwe eju m obi.”
Ihe i nwere ike ịmụta na Baịbụl: Pọl ma ebe ọ na-anaghị eme nke ọma, ọ bụ ya mere o ji kwuo, sị: “N’ezie, iwu Chineke na-eme m obi ụtọ, dị ka mmadụ m bụ n’ime si dị, ma ana m ahụ n’ahụ́ m iwu ọzọ nke na-alụso iwu nke uche m agha, na-adọrọkwa m n’agha gaa n’iwu nke mmehie.”—Ndị Rom 7:22, 23.
Leruo onwe gị anya. Olee ebe ị na-anaghị eme nke ọma i kwesịrị ịgba mbọ mewe nke ọma?
“Achọpụtara m na mgbe ọ bụla m lere fim gbasara nwoke na nwaanyị, obi na-ajọ m njọ nke na m na-achọwa nwa okorobịa mụ na ya ga-akpawa. Ugbu a, amarala m na ọ bụghị fim niile ka m kwesịrị ịna-ele.”—Bridget.
NKE ATỌ: OLEE IHE NDỊ M KPEBIRI IME NÁ NDỤ?
Ihe mere i ji kwesị ịjụ onwe gị ajụjụ a: I nwee ihe ndị i kpebiri ime ná ndụ, ndụ gị agaghị adị ghaa ghaa ghaa, ị ga na-agbara onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla chọrọ ime ka ị ghara ime ihe ahụ ọsọ.
Chebagodịrị ihe a echiche: Ì nwere ike nọkata gwa onye tagzi ka o buru gị gbagharịwa ebe niile ruo mgbe mmanụ ụgbọala ya gwụrụ? Ị manụ na a ga-elewe onye mere ụdị ihe ahụ anya ka onye iberiibe, ọ ga-efukwa ya ezigbote ego. Ọ bụrụ na i nwee ihe ndị i kpebiri ime ná ndụ, ọ ga-eme ka ị ghara iji ndụ gị na-eme ihe na-enweghị isi, ị ga-agbalịsikwa ike hụ na i mere ihe ndị ahụ i kpebiri.
Ihe i nwere ike ịmụta na Baịbụl: Pọl kwuru, sị: “Otú m si agba ọsọ abụghị ihe a na-ejighị n’aka.” (1 Ndị Kọrịnt 9:26) Pọl nwere ihe ndị o kpebiri ime ná ndụ ya, ọ bụ ya mere na o kweghị ka ihe ọ bụla ọzọ megharịa ya anya.—Ndị Filipaị 3:12-14.
Leruo onwe gị anya. N’okpuru ebe a, dee ihe atọ ị ga-achọ ime tupu afọ ọzọ agwụchaa.
N’ime ihe atọ ahụ i dere, họrọ nke i chere kacha dị gị mkpa ma dee ihe i nwere ike imewe ugbu a ka i nwee ike hụ na i mere ya.
“Ma mụ enweghị ihe m kpebiri ime, o nweghị ezigbo ihe m na-emepụtali. Ọ dị mma mmadụ inwe ihe o kpebiri ime ma gbaa mbọ hụ na o mere ya.”—Onyebuchi.
NKE ANỌ: OLEE IHE NDỊ M KWEERE?
Ihe mere i ji kwesị ịjụ onwe gị ajụjụ a: Ọ bụrụ na o nweghị ihe ndị i kweere, ị ga na-eme ihe ọ bụla mmadụ gwara gị mee. Otú ahụ ogwumagala si agbanwe ụcha ya ka ị ga-esi na-agbanwe, ka i nwee ike imete ndị ọgbọ gị mma. I mewekwanụ otú ahụ, ị gaghị abụ ụdị onye ị chọrọ ịbụ.
Chebagodịrị ihe a echiche: Baịbụl gwara Ndị Kraịst ka ha ‘chọpụta n’onwe ha ihe bụ́ uche Chineke, nke ziri ezi na nke dị ya mma, nke zukwara okè.’ (Ndị Rom 12:2) Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ị mụtara n’Okwu Chineke, ị ga-abụ ụdị onye ị chọrọ ịbụ n’agbanyeghị ihe ndị ọzọ na-eme.
Ihe i nwere ike ịmụta na Baịbụl: Mgbe Daniel onye amụma ka na-eto eto, o “kpebisiri ike n’obi ya” na ya ga na-eme ihe Chineke kwuru n’agbanyeghị na ya na ndị ezinụlọ ha ebighị, ndị na-efe Chineke otú yanwa na-efe anọghịkwa nso. (Daniel 1:8) Ị̀ chọpụtara na ihe mere o ji bụrụ ihe ọ chọrọ ịbụ bụ maka na o kpebisiri ike ime uche Chineke? Daniel rubeere Chineke isi.
Leruo onwe gị anya. Olee ihe ndị i kweere? Dị ka ihe atụ:
● Ì kweere na Chineke dị? Ya bụrụ na i kweere, gịnị mere i ji kwere? Olee ihe mere obi ji sie gị ike na Chineke dị?
● Ì kweere na ime ihe Baịbụl kwuru ga-abara gị uru ná ndụ? Ya bụrụ na i kweere, gịnị mere i ji kwere? Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru na mmadụ na onye na-abụghị di ya ma ọ bụ nwunye ya ekwesịghị inwe mmekọahụ. Ì kweere na ọ bụrụ na i gee Chineke ntị n’okwu a, ọ ga-aka abara gị uru karịa imewe otú ndị ọgbọ gị na-eme?
Ajụjụ ndị a abụghị ajụjụ ndị ị ga-aza ọkụ ọkụ. Medaa obi chọpụta ihe mere i ji kwere ihe ndị i kweere. I mee otú ahụ, ọ ga-eme ka obi sie gị ike ịkọwara ha ndị ọzọ.—Ilu 14:15; 1 Pita 3:15.
“Ụmụ akwụkwọ na-amanyekarị nwa akwụkwọ ibe ha ka o mee ihe ha chọrọ ma ha chọpụta na onye ahụ akwụsichaghị ike n’ihe o kweere. Achọghị m ka ụdị ihe ahụ mee m, ọ bụ ya mere m ji gbaa mbọ chọpụta ihe mere ihe ndị e ji Baịbụl kụziere m ji bụrụ eziokwu. Anaghịzi m asị ndị mmadụ, ‘Agaghị m eme ihe a ma ọ bụ ihe a n’ihi na anyị anaghị eme ya.’ Kama, m na-agwa ha na ‘ihe a ma ọ bụ ihe a adịghị mma.’ Ihe ọ bụla m kwuru na ọ dịghị mma bụ ihe m kweere.”​—Danielle.
Mee elu mee ala, gịnwa ga-ekpebi ụdị onye ị chọrọ ịbụ. Ọ bụ gịnwa ga-ekpebi ma ị̀ ga-adị ka akwụkwọ kpọrọ nkụ nke ikuku na-ebugharị ka ị̀ ga-adị ka osisi gwunyesiri ike n’ala nke oké ifufe na-agaghị emeli ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na i kpebisie ike na ị ga-abụ ụdị onye ị chọrọ ịbụ, ị ga-adị ka osisi ahụ. O nweghịkwa ihe ga-eme ka mmadụ gbanwee gị.
^ par. 8 Aha a kpọrọ ụfọdụ ndị n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ha.
[Igbe/Foto ndị dị na peeji nke 11]
“Ugbu a m toliterela, m chọọ ime ihe ọ bụla, m na-ebu ụzọ chebara ya echiche nke ọma tupu m mewe ya, ma ihe ahụ ọ̀ bụ obere ihe ma ọ̀ bụ nnukwu ihe. M na-akpachakwara anya ka m ghara ime ihe ọ bụla ga-ewute Chineke.”
“Mgbe m ka dị obere, m hụ onye ọ bụla na-anaghị eme otú m na-eme, ya adị m ka onye ahụ ò nwere nsogbu. Ma, ugbu a, ọ naghịzi adị m otú ahụ, anaghịkwa m eleda ndị mmadụ anya.”
[Igbe dị na peeji nke 12]
IHE GỊ NA NDỊ MỤRỤ GỊ NWERE IKE ỊKPA
Olee ihe ndị unu chọpụtara na m ma eme? Olee àgwà unu chere m kwesịrị ịgba mbọ kwụsị ịna-akpa? Olee ihe ndị mere obi ji sie unu ike na iwu ndị Chineke nyere ụmụ mmadụ bara ezigbo uru?
[Foto dị peeji nke 12]
I kpebisie ike ịbụ ụdị onye ị chọrọ ịbụ, ị ga-adị ka osisi gwunyesiri ike n’ala, nke oké ifufe na-agaghị emeli ihe ọ bụla
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Ụdị Onye M Bụ?
Ihe Isi Ike nke Kpara Ụwa Aka Ọjọọ
Uru Ọ Bara Ichekwa Ego Kama Ịzụfusi Ya
Otú Ị ga-esi Jiri Ego Gị Na-eme Ihe Bara Uru
Ndụmọdụ Asaa Ndị Ga-abara Gị Uru
NDỊ NA-ETO ETO NA-AJỤ, SỊ Olee Ụdị Onye M Bụ?
NDỊ NA-ETO ETO NA-AJỤ, SỊ Ole Ndị Bụ Ezigbo Ndị Enyi M?
Gịnị Ka M Kwesịrị Ịma Gbasara Ịkparịta Ụka n’Ịntanet?—Nkebi nke Mbụ
Ihe Ga-eme Ka Di na Nwunye Na-ebi n’Udo
Anyịrị M Ndị Nazi
Ihe Ga-enyere Mmadụ Aka Ka Ahụ́ Na-adị Ya Mma
Gịnị Ka M Kwesịrị Ịma Gbasara Ịkparịta Ụka n’Ịntanet?—Nkebi nke Abụọ
Chineke Ọ̀ Chọrọ Ka Anyị Wepụta Otu Ụbọchị Pụrụ Iche n’Izu Anyị Ga-eji Na-efe Ya?
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere TETA! Jenụwarị 2012
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ TETA! Jenụwarị 2012
TETA! Jenụwarị 2012